यी हुन् आयुर्वेदअनुसार स्वस्थ शरीरका ९ संकेत - Manaslu Post
यी हुन् आयुर्वेदअनुसार स्वस्थ शरीरका ९ संकेत
मनास्लु पाेष्ट ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०८:४२ 170 पटक हेरिएको
आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ ? सामान्यत: यसका लागि हामी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्छौं । यद्यपि हामी कति स्वस्थ, तन्दुरुस्त छौं भन्ने कुरा हाम्रा सामान्य दिनचर्या वा आनीबानीबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
आयुर्वेदले यसका निम्ति एउटा सरल प्रणाली अपनाएको छ । आयुर्वेद भन्छ, शरीरमा तीन किसिमको दोष पाइन्छ– वात, पित्त र कफ । यही तीन दोषका अनुसार तपाईंको शरीरको बनावट, दोष, मानसिक अवस्था र स्वभाव पत्ता लगाउन सकिन्छ । आयुर्वेदमा राम्रो स्वास्थ्यको दश संकेत बताइएको छ ।
१. चुस्त पाचन प्रणाली
आयुर्वेदअनुसार यदि तपाईंले खाना खाएपछि बोझिलो एवं भारी महसुस गर्नु राम्रो संकेत होइन । बरु, खाना खाइसकेपछि हल्का र तन्दुरुस्त महसुस गर्नुपर्छ भने तपाईंको रहनसहन र आहार एकदम सही छ भन्ने बुझिन्छ ।
प्राय: मानिसहरू खाना खाइसकेपछि पेटमा ग्यास हुने, छातीमा जलन हुने, सुस्त एवं आलस्य महसुस हुने गर्छन् । यसको मुख्य दुई कारण हुन सक्छ । या त तपाईं कुनै रोगको शिकार हुनुहुन्छ वा तपाईं सही ढंगले सही मात्रामा खाना खाइरहनुभएको छैन ।
२. पाँच इन्द्रियले सही काम
मानव शरीर अद्भूत छ । हाम्रा पाँच इन्द्रिय छन् । यही इन्द्रियले हामी अनेक कुरा महसुस गर्न सक्छौं । यदि तपाईं आफू आसपासको क्षेत्रबारे के भइरहेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईंको इन्द्रिय ठिकठाक छ ।
आफू अगाडिको कुरा स्पष्ट देखिरहनुभएको छ । आफ्नो आसपासको आवाज स्पष्टसँग सुनिरहनुभएको छ । आफू आसपासको मौसम सही ढंगले अनुभूत गरिरहनुभएको छ । आफू आसपासको गन्ध, सुगन्ध राम्ररी महसुस गरिरहनुभएको भने तपाईंको इन्द्रियहरू ठिक छन् ।
३. शान्त स्वभाव एवं प्रसन्न मन
तपाईंको स्वभाव जति शान्त र शीतल छ, उति नै तपाईं ठिकठाक हुनुहुन्छ । सामान्यत शारीरक वा मानसिक रुपले समस्याग्रस्त मान्छे क्रोधित हुन्छन् । विचलित हुन्छन् । रिसाइरहेका हुन्छन् । डराइरहेका हुन्छन् । शान्त हुँदैनन् । तपाईंको शरीर जति स्वस्थ्य छ, उत्तिनै तपाईं शान्त रहनुहुन्छ । तपाईं उति नै उमङ्गित रहनुहुन्छ ।
४. उचित समयमा भोक
राम्रो पाचनको दुई संकेत हुन्छ । एक त तपाईंले खाना खाएपछि त्यो राम्ररी पच्छ । अर्को चाहि खाना खाने समयमा राम्ररी भोक लाग्छ । खाना पच्नु र सही समयमा भोक लाग्नु पनि पाचनयन्त्र सही छ भन्ने कुराको संकेत हो ।
५. समयमा निद्रा
हामी जतिबेर जागा रहन्छौं उति नै समय विश्राम पनि चाहिन्छ । शरीरलाई सही समयमा, सही अवधि विश्राम चाहिन्छ । यस्तो विश्राम हामी सुतेर वा निद्राको अवस्थामा लिन सक्छौं । यदि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो छ भने हामीलाई सही समयमा निद्रा लाग्छ । सुत्नसाथ गहिरो निद्रामा पर्छौं । राति निद्रा भड्किँदैन वा बिथोलिँदैन । निद्राबाट खुलेपछि चंगा अनुभव गर्छौं । यदि त्यसो हो भने तपाईंको स्वास्थ्य ठिक छ ।
६. सही समयमा उठ्ने
तपाईं प्राय कुन समयमा उठ्नुहुन्छ ? सुत्ने समयसँग निर्भर होला । तपाईं अबेर सुत्नुभयो भने अबेर नै उठ्नुहुनेछ । चाँडै सुत्नुभयो भने चाँडै उठ्नुहुनेछ । यदि तपाईंको उठ्ने तालिका नियमित छ भने पनि तपाईंको स्वास्थ्य ठिक छ भन्ने बुझिन्छ ।
७. दैनिक पेटको सफाइ
एक स्वस्थ व्यक्तिको पेटको सफाइ दिनमा दुई पटक हुन्छ । एक पटक बिहान र अर्को पटक साँझमा । यस्तोमा सही खानपानको आवश्यकता हुन्छ । यदि तपाईं सही खानपानबाट आफ्नो पेट सफा राख्नुहुन्छ भने तपाईंको शरीरबाट धेरै रोग हट्छ। यहाँसम्म कि पसिना आउनुपनि स्वास्थ्य जीवनको संकेत हो । पसिनाको माध्यमबाट शरीरबाट युरिनभन्दा बढी विषाक्त तत्व निस्किन्छ ।
८. सन्तुलित तौल
तपाईंको उचाइअनुसार उचित किसिमको तौल आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईंको तौल सधैं उही रहन्छ वा धेरै घटबड हुँदैन भने यसलाई पनि राम्रो संकेत मान्नुपर्छ ।
तौल सन्तुलित राख्नका लागि सही खानपान, सहि दिनचर्या एवं सक्रियता आवश्यक हुन्छ ।
९. प्राकृतिक तागत र प्रतिरोधी क्षमता
जुन व्यक्ति काम गर्दा चाँडै थाक्दैन वा बलको श्रमको काम गर्न सक्छन् । साथै उनीहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बलियो हुन्छ । यस्तो व्यक्तिको शरीर सही हुन्छ।
निजी अस्पतालको कोरोना भाइरस
मनसुनमा सताउने १० संक्रामक
काेरोनाको परीक्षण तीब्र बनाउन
रोल्पाका कृष्णबहादुरको थियो गोगंबुमा टाउको छुट्इएको अबस्थमा फेला परेको शव
सम्बन्ध बिग्रेपछि कल्पनाले यसरी गरिन् कृष्णबहादुरको हत्या
परदेशमा बलात्कृत, गर्भ बोकेर देश फर्केपछि घर न घाट
जिउँदो हुँदा साथ दिने यहाँ कोही छैनः ज्योती मगर
विप्लव समूह नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुन कारागार चलान
उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द
भारतीय सिरियलमा निरिशाको तीन बर्षपछि कमब्याक
घर भत्किदा चारको मृत्यु, पाँच घाइते, चार गम्भीर
जातिय बिभेद बिरुद्ध शन्देशमुलक गीत “जातिय भेदभाव” सार्वजनिक (भिडियो सहित)
गुगलले हटायो २५ सय युट्युब च्यानल